Mora hitazomana ny gorodona matevina? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Mora hitazomana ny gorodona matevina?
Ankehitriny dia mihamaro ny fianakaviana mampiasa gorodona vita amin'ny hazo amin'ny haingon-trano, fa ny fomba hihazonana ny gorodona vita amin'ny hazo foana dia aretin'andoha foana. Andao arahana miaraka amin'ilay mpamoaka lahatsoratra.
Voalohany, eo amin'ny fomba fampiasana gorodona vita amin'ny hazo, tsara kokoa ny tsy hisian'ny fitrandrahana fasika ao anaty efitrano.Fandehanana fasika no hitondra amin'ny tany, izay hanentana ny gorodona. Ampahatsiahivo ny rehetra fa tsy tsara ny mitondra fasika maloto, izay mbola mahatonga ny fikosoham-bary, ary noho izany dia tokony esorina ara-potoana ny fasika izay entina ao anaty efitrano.Amin'ny ankapobeny, dia tsy ilaina ny mameno ny banga madio, ary tsy mila manahy momba ny ady sy ny hatsiaka vokatry ny hamandoana.
2. Taorian'ny fampiasana telo na dimy taona, raha misy abrasion any amin'ny faritra tsirairay, azonao atao ny mamorona eo an-toerana, izany hoe, ampiharo indray ny coating eo amin'ny faritra eo an-toerana.Ny fomba faran'izay tsotra.Ny moramora dia apetraho moramora ilay faritra sombin-dàlana miaraka amin'ny ravin-taratasy mba hanala ny loto eo ambonin'ilay. Avy eo akio moramora amin'ny lamba malefaka malemy, apetaho amin'ny coating, na asiana sarimihetsika polyester amin'ny ampahany.
3. Ho an'ny gorodona matevina misy rindrina vita amin'ny loko, dia azonao atao ny mampihatra savoka mandeha isaky ny enim-bolana. Ny gorodona momba ny kisoa miaraka amina potika vita amin'ny abrasion eny an-tany dia mora ny mikarakara toy ny gorodona amin'ny laminate. Araho ny fahasimban'ny hafanana. Aza asiana zavatra mafana toy ny kapoaky ny rano mafana eny amin'ny tany, mba tsy hanimba ny sarimihetsika hosodoko. Mandritra izany fotoana izany, andramo ny hisorohana ny tara-masoandro mivantana amin'ny tany mandritra ny fotoana maharitra, mba hialana amin'ny fanamainana voalohany sy ny famoretana ilay sarimihetsika hosodoko taorian'ny tara-masoandro mahery vaika mahery vaika.
Fahefatra, ny fanaka dia azo apetraka fotsiny amin'ny tany 24 ora aorian'ny fametrahana ny gorodona, ary tokony hatao tsinontsinona ny fihetsiky ny olona ao anaty 24 ora. Rehefa tsy ao an-trano ianao dia avereno azafady ny varavarankely sy ny varavarana, indrindra ny ravina, mba tsy handrebirebena ny gorodona amin'ny rano na orana na rano.
5. Rehefa mitazona ny gorodona vita amin'ny hazo, aza manasa, manosihosy na manadio azy amin'ny vovoka decontamination. Matetika no mila mofomamy amin'ny paty na akanjo matevina. Esory ny faritra malefaka madio miaraka amin'ny mpanadio manokana. Halaviro ny fiatraikany mahery eo amin'ny gorodona hazo.Rehefa mamindra ny fanaka dia mahasoa ny manangana azy.Afa miketsa mivantana.Mahatongotra ny tongotry ny fanaka.
Mora hitazomana ny gorodona matevina? Ny atiny mifandraika